» “ज्ञानेन्द्र शाहीको आ,क्रोश– म दि रा को स्वादै थाहा नभएको मान्छेलाई मा,पसेको आ,रोप ? “ज्ञानेन्द्र शाहीको आ,क्रोश– म दि रा को स्वादै थाहा नभएको मान्छेलाई मा,पसेको आ,रोप ? – हाम्रो खबर
“ज्ञानेन्द्र शाहीको आ,क्रोश– म दि रा को स्वादै थाहा नभएको मान्छेलाई मा,पसेको आ,रोप ?
2021, June 16th, Wednesday
हाम्रोखबर संवाददाता 499 Views
“जेठ २८ गते शुक्रवार सुर्खेत सदरमुकाम नजिकै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको ११ सदस्यीय टोली र स्थानीयका विच झ ड प भयो ।”
“वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कर्रेखोलाभन्दा तल गडगडे भन्ने ठाउँमा भएको झडपमा शाहीको टोलीका केहि सदस्य र केहि गाउँले घा,ई,ते भए । शाहीको टोलीलाई तत्कालै अस्पताल भर्ना गरियो र सामान्य उपचार तथा मा प से चेकजाँच पनि गरिएको पाईएको छ।”
बशाहीको टोलीमाथि खोलामा तार जाली र ढुंगाको काम गरिरहेका स्थानीय मजदुर युवाहरूसङ्ग अ प शब्दसहित दु’ब्र्यवहार गरेको आ’रो’प लाग्यो। उनीहरुले मा’प’से गरेर आफूहरूमाथि दु’ब्र्यवहार गरेको ति युवाहरुले आ’रो’प लगाए ।”
‘तर, शाहीको टोलीले भने नियोजित रुपमा आफुहरु माथि आ क्र म ण गरिएको जनाएको छ । आफुहरुले मा प से पनि नगरेको र आफनोतर्फवाट आ क्र म ण पनि नभएको शाहीले दावी गरे । अस्पतालमा गरिएको मापसे चेकमा पनि आफुहरुले मा द क पदार्थ सेवन नगरेको पुष्टि भएको उनले वताए । ‘पहिलो कुरा त मैले आजसम्म मा प से गरेको छैन। मदिराको स्वाद नै थाहा नभएको मान्छेलाई मापसेको आ,रोप लगाउनु नै गलत हो’ उनले भने–‘त्यसमाथि त्यस दिन हामीले मा,पसे नगरेको प्रमाणित गरेर चिकित्सकले दिएको सर्टिफिकेट हामीसँग छ ।’
“यति मात्र होईन, घटनापछि स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा घटनामा संलग्न युवाहरुले आफ्नो ग,ल्ति स्विकार गरेको शाहीले जानकारी दिए । उनीहरुले आफ्नो ग,ल्ती स्वीकार गरेपछि मा,फी दिएको शाहीको भनाई छ ।”
“घ,टनामा संलग्न युवाहरु टंक, ललित गाहा, नवराज गिरीसहित ५ युवाले आफूले ग,ल्ती गरेको र मा,पसे गरेको सुरमा यस्तो कार्य गरेको वताएपछि उनीहरुलाई मा,फी दिएको शाहीको भनाई छ। युवाहरुले मा,फी मागेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ ।”